ညီလင်းသစ်: နိမ့်သော မြန်မာ့စီးပွားရေးထဲက မြင့်သော သမ္မတအကြံပေး
အလဲဗင်းမီဒီယာ စာစောင်ထဲမှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်နေထွန်းနိုင်ရဲ့ “မြန်မာ့စီးပွားရေး ပြိုလဲသွားနိုင်သလား” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာသမ္မတရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေးဦးမြင့်က ပြန်လှန်ရေးထားတဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ဖတ်ရပါတယ်၊ အဲဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီရက်ပိုင်းမှာ စာဖတ်သူတွေကြား အတော်လေးပွဲဆူသွားခဲ့ရတယ်၊ ပွဲဆူရတဲ့ အကြောင်းရင်းက အိတ်ဖွင့်ပေးစာပါ အကြောင်းအရာတွေဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ အကြံပေး၊ ပညာရှင်ဆိုသူတယောက် ရေးသင့်တဲ့ အဆင့်အတန်းထက် များစွာနိမ့်နေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…၊
နေထွန်းနိုင်ရဲ့ ဆောင်းပါး အလဲဗင်းမီဒီယာမှာ ပါလာကတည်းက ကျနော်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ခေါင်းစဉ်က မြန်မာ့စီးပွားရေးနဲ့ကို ချီလာတာဆိုတော့ နည်းနည်းကြီးကျယ်တဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်လို့ ဆိုနိုင်သလို နိုင်ငံတခုရဲ့ စီးပွားရေးကိစ္စဖြစ်လို့ ရေးမယ်ဆိုရင် အတော်လေးလည်း ကျယ်ပြန့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကြီးကျယ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်ဖက်စွာပဲ နေထွန်းနိုင်က ကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက် စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသွားခဲ့တယ်၊ အာရှဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ် စတာတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာ အကိုးအကားတွေလည်း ပါ,ပါတယ်၊ နှစ်ရက်၊ သုံးရက်လောက် အကြာမှာတော့ စီးပွားရေးအကြံပေး ဦးမြင့်က နေထွန်းနိုင်ကို နာမည်တပ်ပြီး အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပြန်ပေးတယ်၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ပြိုလဲနိုင်သလား ဆိုတော့ ဒါဟာ သမ္မတရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်တဲ့ သူ့မှာ ဖြေရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆပြီး ပြန်ဖြေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် သမ္မတက ခင်ဗျားတခုခုတော့ လုပ်ပါဦး-လို့ ပြောလို့ပဲ တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ ပြန်ရေးသလား၊ ဦးမြင့်ပဲ သိမှာပါ…၊
ဘယ်လိုကြောင့်ပဲ ရေးရေး… ဦးမြင့်ရဲ့ ပေးစာဟာ ဆောင်းပါးအပေါ် လွဲမှားစွာ တုံ့ပြန်ထားတဲ့ စာတစောင်ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်၊ မူရင်းဆောင်းပါးမှာ အချက်အလက်၊ အကိုးအကားပေါင်းများစွာနဲ့ ရေးထားပေမယ့်လည်း ဦးမြင့်ရဲ့ ပြန်ဖြေပုံဟာ တိတိကျကျ ပြန်ချေပတာ၊ အကြောင်းအကျိုး ပြန်ရှင်းလင်းတာမျိုး မရှိဘဲ အပေါ်ယံဆန်လွန်းလှတယ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီး အချက်အလက်တွေကို အဓိကထား မပြောဘဲ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုန်းပေါ်မှာ ဝေဖန်တာ၊ စကားနာထိုးတာဆန်ဆန် ရေးသားတာ စတာတွေက ပိုများနေခဲ့တယ်၊ ဒါမျိုးကို ဒီလိုရေးရတယ်၊ ခင်ဗျားရေးတဲ့ အဲဒီ အသုံးအနှုန်းကို နားမလည်ဘူး၊ ဒါကတော့ အင်မတန်ညံ့ဖျင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားဖြစ်တယ်၊ recession, depression, economic collapse စတဲ့ စကားလုံးတွေကို ခင်ဗျား ဘယ်လိုမျိုး နားလည်ထားလို့လဲ စတာမျိုးတွေအထိ ဦးမြင့်ဟာ ရေးခဲ့တယ်၊ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ မူရင်းပေးစာရော၊ အလဲဗင်းက မြန်မာပြန်ထားတဲ့ ဘာသာပြန်ကိုရော ကျနော်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်၊ နှစ်ခုစလုံးမှာ စီးပွားရေးပညာရှင်ရဲ့ ပညာမာနကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရတယ်၊ ဒီလို အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုန်းမျိုး၊ စီးပွားရေးဗဟုသုတမျိုးလောက်နဲ့ လာမရေးနဲ့လို့ ပြောချင်ပုံရတယ်၊ သူကိုယ်တိုင် သမ္မတကို အကြံဥာဏ်တွေ ပေးပြီး ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တခုရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ချွတ်ခြုံကျနေတယ်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေ များနေတယ်၊ ပြိုလဲပြီး ပျက်သုဉ်းမယ့် အလားအလာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆန်းစစ်၊ သုံးသပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဦးမြင့်ဟာ ကြိုက်ပုံမရတာ သေချာပါတယ်၊ ကျနော်တို့လုပ်နေတာကို မကြိုက်လို့ ထွက်ပေးရမယ်ဆိုလည်း ကျနော်တို့နေရာ အစားထိုးနိုင်မယ့် လူတွေရဲ့ နာမည်လေးတွေ တဆိတ်လောက် ပြောပါဦး ဆိုတဲ့ လူကြီးမဆန်တဲ့ အသုံးမျိုးတွေလည်း သုံးခဲ့တယ်…၊
သေသေချာချာ အားထုတ်ပြီး သုံးသပ်၊ ရေးသားထားတဲ့ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို လျစ်လျူမရှုဘဲ အရေးတယူ တုံ့ပြန်တာကတော့ ကျနော်တို့ ကြိုဆိုရမှာပါ၊၊ ဒါပေမယ့် ဦးမြင့်လွဲသွားတဲ့ အချက်က သူ ဦးတည်ရေးနေတာက ပါရဂူဘွဲ့ယူမယ့် သုတေသနစာတမ်းတစောင် မဟုတ်ဘဲ အများပြည်သူဖတ်ဖို့ ရေးထားတဲ့ ယေဘုယျဆောင်းပါးတပုဒ်ဆိုတာ မေ့သွားတဲ့ အချက်ပါပဲ၊ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဦးမြင့်ရဲ့ ပေးစာမှာ ပါမောက္ခတွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ မှတ်ချက်ရေးနည်းမျိုးနဲ့ ပြန်ရေးထားတာ တွေ့ရတာပါ၊ စကားလုံးတွေ အသေအချာရွေးဖို့၊ ဝေါဟာရ ရင်းမြစ်တွေကို သေချာနားလည်ဖို့ စတာတွေက ပါရဂူဘွဲ့ စာတမ်းတွေအတွက် အရေးကြီးမှာဖြစ်ပေမယ့် အများပြည်သူဖတ်တဲ့ သတင်းစာမျိုးအတွက်တော့ အံမဝင်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် ပြည်သူလူထုက ဦးမြင့်လို့ ပညာရှင်တယောက်ဆီက မြန်မာ့စီးပွားရေး မပြိုလဲနိုင်တဲ့ အကြောင်း၊ ရှေ့လျှောက် အလားအလာက ဘာ၊ ရေတိုရေရှည်မှာ ရလာမယ့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေက ဘယ်လို စတဲ့ရှင်းပြမှုမျိုးကို မျှော်လင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ အခုလို အဆီအငေါ် မတည့်တဲ့ ပေးစာက သူ့ကို လူထုနဲ့ ဝေးကွာသွားစေပါတယ်၊ နဂိုကတည်းကမှ စီးပွားရေးကျပ်တည်းလို့ မောပန်းနေကြတဲ့ လူတွေကို အနှစ်သာရပိုင်းမှာ လျော့ရဲရဲနိုင်တဲ့ ပေးစာတစောင်က ပိုပြီးတော့ ဒေါသတွေသာ ထွက်စေခဲ့တယ်၊ ဒါ့ကြောင့်လည်း အလဲဗင်းမီဒီယာရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ဆောင်းပါးအောက်မှာ ဦးမြင့်အပေါ် မညှာမတာ ဝေဖန်၊ ဆဲဆိုထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေအများကြီး တွေ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဦးမြင့်ဟာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်တဲ့ ပညာရှင်တယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်တွေ့နဲ့ ကင်းကွာတဲ့ တုံ့ပြန်ပြောဆိုပုံတွေ၊ လူထုအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ရှင်းလင်း၊ တင်ပြမှုတွေ မရှိခဲ့တဲ့အတွက် လူထုက သူ့ကို စိတ်ပျက်သွားကြတာပါ၊
နေထွန်းနိုင်ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ပါတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံး မှန်ချင်မှ မှန်လိမ့်မယ်၊ သူ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေဟာလည်း ပြည့်စုံချင်မှ ပြည့်စုံလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဒီဆောင်းပါးကို လူထုအပေါ် စေတနာထားစိတ်နဲ့ ရေးခဲ့တာသေချာတယ်၊ တိုင်းပြည်အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်းအတွက် တတပ်တအားပါဝင်စိတ်နဲ့ ရေးခဲ့တာ ထင်ရှားပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် လူထုက သူ့ဖက်မှာ ရပ်တည်ကြတယ်၊ စိတ်မပျက်ဖို့ ဝိုင်းအားပေးကြတယ်၊ မှားနေတာကို မှားနေတဲ့အကြောင်း၊ မကောင်းတာကို မကောင်းတဲ့အကြောင်း ထောက်ပြပေးမယ့် ဆောင်းပါးတွေ ဆက်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်၊ တကယ်တော့ အသက်ငယ်တာ၊ ကြီးတာ၊ ပညာ များများတတ်တာ၊ နည်းနည်းတတ်တာထက် ရပ်တည်ချက်မှန်ကန်တာ၊ စေတနာပါတာ၊ ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်တာမျိုးကိုပဲ ပြည်သူလူထု ပိုပြီးအလိုရှိတယ်ဆိုတာ သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်ပါတယ်…။ ။
၉ ဧပြီ၊ ၂၀၁၅
Posted by ညီလင်းသစ် au 9.4.15
မူလဆောင်းပါးရော အိတ်ဖွင့်ပေးစာရော မဖတ်ရသေးဘူး အစ်ကို။ ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ သီးသန့် ပြောလာရတယ်ဆိုတော့ ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ရမယ့် စာနှစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားပြီ။
မချစ်လည်း လူပြောများလို့ သေချာ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်တယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ တကယ် စိတ်ပျက်စရာပါ။ ပညာအနေနဲ့ ဦးမြင့် တော်တာတတ်တာကို ငြင်းဆန်စရာလုံးဝ မရှိပေမယ့် ပြန်စာရေးသားပုံကိုတော့ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်သွားမိတယ်။ လူငယ်တွေအပေါ် မင်း နုပါသေးတယ်ကွာဆိုတဲ့အမြင်တွေ လူကြီးတွေမှာ ဘယ်တော့များမှ ဖျောက်ပါ့မလဲ....mutual respect ဆိုတာလေး မေ့များနေကြသလားပဲ...:(
ဒီနေ့မှ Share ဖြစ်တယ်..
နှစ်ဖက်ပေါ့လေ ....... မှားတယ် မှန်တယ် မပြောလိုပေမယ့် နှစ်ဦးစလုံးမှာ တစ်လွဲမာနလေးတွေတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ ညီတော့ ခံစားမိတယ် ။
Long time dint visit to your blog.
You are still my favorite. Good job..
နိမ့်သော မြန်မာ့စီးပွားရေးထဲက မြင့်သော သမ္မတအကြံပေး...